कुन समयमा भात खाँदा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक ? – Aaj ko Sandesh
…त्यसपछि बे’हु’ला म’ण्ड’व उ’ठे’र भित्र ग’ए’का थिए….
सपना रोका मगरको फेरिएको दैनिकी: बिहान कलेज, दिउँसो श’व व्यवस्थापन
धादिङमा ठक्करबाट घाइते महिलालाई एक्स्काभेटर चालकले जिउँदै खाडलमा पुरे
मुख्य पृष्ठ /News/कुन समयमा भात खाँदा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक ?
कुन समयमा भात खाँदा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक ?
सुत्नका लागि उत्तम औषधि हो, भात । त्यसकारण बेलुकी मात्र खाने हो । हाम्रो दिमागले सुत्ने समयमा ‘मेलाटोनिन’ नाम गरेको केमिकल निस्कासन गर्छ । मेलाटोनिनका केही तत्व भातमा पनि हुन्छन् । त्यसकारण भात खानासाथ मान्छेले काम गर्न सक्दैन, किनभने त्यो केमिकलले शरीरलाई अल्छी बनाउँछ । काम गर्न शरीर तात्नुपर्छ । जबकि, भात खाएपछि शरीर चिसो हुन्छ । सुत्नेवेलामा अलि चिसो भयो भने मीठो निद्रा लाग्छ । त्यसैले सुत्नेवेलामा भात खानु राम्रो हुन्छ ।
बिहान गहुँ वा जौ उत्तम
बिहान उठ्नासाथ गहुँ या जौबाट दिन सुरु गर्न सकिन्छ । गहुँ र जौमा शरीरलाई चाहिने पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्ने केमिकल हुन्छ । जुन केमिकलले शरीरमा गएर शरीरको ऊर्जाको स्तर बढाइदिन्छन् । भात खाने मान्छेलाई काम गर्न झ्याउ लाग्छ भने जौ खाने मान्छेलाई चुप लाग्न झ्याउ लाग्छ । त्यसकारण बिहान जौ या गहँुबाट दिन सुरु गर्ने हो भने व्यक्ति ऊर्जाशील हुन्छ । चीनमा गहुँको चाउचाउ खान्छन्, भारतमा रोटी खान्छन् । हामी भातबाहेक केही खाँदैनौँ । यो प्रवृत्ति बिस्तारै परिवर्तन हुँदै छ । नेपालीले अब आफ्नो खानपानमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ ।
नेपाल विकास नहुनुको पछि पनि मैले यही भाते प्रवृत्ति देखेँ, किनभने हामी बिहान–बेलुकी नै भात खाइरहेका छौँ । हिजोआज यो प्रकारान्तर रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । आफूले सकभर काम नगर्ने र अरूलाई आफ्नो काम गर्न लगाउने पनि त्यही भाते मानसिकता हो ।
विदेशतिर मान्छेहरू आफ्नो काम आफैँ गर्छन्, तर हामी आपूmले खाएको जुठो प्लेटसमेत अरूलाई माझ्न लगाइरहेका हुन्छौँ । यो भातकै मनोवैज्ञानिक असर हो । यसलाई हामीले पुस्तौँदेखि ‘चलन’ मान्दै आएका छौँ । तर, यो खासमा हाम्रो ‘खाने बानी’बाट विकास हुँदै गएको हो । भनिन्छ नि, ‘यु आर, ह्वाट यु इट’ ।
मानिस खानाले नै बिगारेको प्राणी हो । यसको मतलव भात नै खान हुँदैन भन्ने होइन । भात खान हुन्छ । तर, त्यसको समय मिल्नुपर्छ । भात भनेर फेरि ह्वाइट हैन ब्राउन राइसको कुरा गरेको हुँ । सुत्नका लागि उत्तम औषधि हो, भात । त्यसकारण बेलुकी मात्र खाने हो ।